Inkampani - Hebei Faye Co, Ltd.
USihlalo Ophezulu Wezingane
Ithebula Lokuguqulwa Kwezingane
Ithebula lezingane nezihlalo
Hebei Faye Co, Ltd.
Ukusebenzela izingelosi ezincane, ukuphepha kuhlala kungu-NO.1 kithina.
I-Hebei Faye Co, Ltd ngumphakeli ochwepheshe owenzelwe ifenisha yasekhaya ikakhulukazi ifenisha yezingane / yezingane nefenisha yangaphandle, ubuciko basekhaya njll. Cishe une-10years isipiliyoni, manje sesithumela imikhiqizo yethu emazweni angaphezu kuka-30countries amboza amazwekazi ayi-5 (esebenza okokugcina amazwekazi amabili nawo!). Amakhasimende ethu afaka abathengisi bezitolo, abathengisi, izitolo eziku-inthanethi (i-Amazon, i-Ebay), abathengisi nabo brand yomhlaba wonke. Ukusebenzela izingelosi ezincane, sikuqonda kahle ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi umkhiqizo uphephe, ngakho-ke ukuphepha kuhlala kungu-NO.1 kithina.
Ukuthwala lo msebenzi, ujwayele izimiso ezifanele kanye ne-ASTM, EN, AS / NZS ... amazinga okuphepha futhi asuselwa kulokhu, sineqembu eliqinile le-QC elilandela ukukhiqizwa kwangaphambilini / maphakathi / kokuphela ukuze kuqinisekiswe ngokuphelele ukuthi umkhiqizo wokugcina uwukuthi okufunwa amakhasimende ethu.
Uyemukela wonke amaklayenti ukuthi aqhubeke nokuxoxa :)
Njengoba sinolwazi cishe lwe-10years kulo mkhakha, ujwayelene nemithetho efanelekile ne-ASTM, EN, AS / NZS amazinga okuphepha, ngakho-ke imikhiqizo yethu ihlala ifanelekile futhi iphephile. Ukunikela ngentengo eshibhile akuwona umgomo wethu. Esikhundleni salokho, sisebenza kumkhiqizo oqeqeshiwe futhi ophephile okokuqala bese sisebenza ngezindleko eziphansi. Njengoba kunzima ukugcina into eyodwa ihlala ithengisa kangcono, senza izinto ezintsha futhi sisebenzisana / nabaqambi abahlukahlukene ukuletha imikhiqizo emisha njalo ngonyaka.Ngokuthokozela lokhu okusha, manje sithumela imikhiqizo yethu emazweni angaphezu kwangama-20 futhi sinabamele abathile ezindaweni ezithile , kufaka phakathi abathengisi be-Amazon, Brands online, Wholesaleers, Retailers njll.
Kuzoba wudumo ukusebenza nawe uma kuvunyelwe. Ngaphezu kwalokho, kuzoba uhambo olumnandi empilweni yethu
Isevisi ye-7x24x365 + neqembu le-QC elinolwazi, ikhwalithi ihlala iphakeme kakhulu ngokuphepha! Wonke umuntu ukhathazekile ngentengo futhi kufanele sisho ukuthi intengo yethu kungenzeka ingabi ehamba phambili kodwa kunengqondo, amasampula amahhala anikezwa ukuthi uhlole. Futhi ujabule ukukunikeza izinto ezenziwe ngezifiso ngaphansi komkhiqizo wakho. Usizo oluncane luletha ukubuya okuningi, ngethemba lokusekelwa isikhathi eside!
Thola imikhiqizo yethu yakamuva noma i-Pricelist
ICoronavirus (COVID-19) futhi ikukhathalela ...
Iseluleko seCoronavirus (COVID-19) ngokukhulelwa